Voronezh State Medical Academy - Study Medicine, Mbbs na Russia
tọrọ ntọala : 1802
Echefukwala discuss Voronezh State Medical Academy
The State Budgetary Institution of Higher Professional Education «Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko »nke ​​Ministry of Public Health nke Russian Federation a maara dị ka otu n'ime mba na-eduga nnyocha na ozizi emmepe na a ngụkọta nke ihe 5,000 ụmụ akwụkwọ. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ochie agụmakwụkwọ njikọ nke Russia. Akụkọ ihe mere eme na-aga azụ 1802 - Na ụbọchị nke Derpt University ntọala, nke kpaliri Voronezh na 1918. na 1930, ya ọgwụ ngalaba ghọrọ otu nọọrọ onwe ha ọgwụ guzobe ememe, nke jikwa ya ulo mmuta okwa 1994. The University abụrụwo ya uru dị ka ihe agụmakwụkwọ alụmdi na-enye elu-edu mmụta na-eduzi elu nnyocha sayensị na Medicine, Biology, na Pharmacy. Àgwà nke ya ịrụ ọrụ na-apụta ìhè fim bụ maka ọnụ ọgụgụ, according to which the university is included in the top ten medical schools of Russia. Ebe ọ bụ na ntọala, ọ kwadebeere karịa 40 puku ọgwụ ọkachamara, gụnyere mba ọzọ ndị si 56 mba nke Europe, Asia na Africa.
The Founder of the University is the RF Government. Onye malitere okpukpe si ike na competencies-aghọ nke onye Ministry of Public Health nke Russian Federation. The University has a perpetual license for educational activity and the state accreditation. The University carries out its activities on the basis of the Statute.
The structure of the University is now presented by 7 n'ahụ na 3 izi institutes.
Karịrị 800 ndị ọrụ gụnyere 149 Dọkịta nke Medical Sciences, 91 professors, na 525 PhD na Medical Sciences na-arụ ezi ihe ma na nkà mmụta sayensị ọrụ a na- 78 departments of the University.
The educational activity of Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko mụụrụ ime na isi nkuzi ihe nke ụlọ akwụkwọ mepụtara na ndabere nke ala izi ụkpụrụ maka elu ọkachamara ọzụzụ na nke sekọndrị, ọrụ agụmakwụkwọ na n'ihi banyere aro mmemme nke ọmụmụ mma site kwekọrọ ekwekọ mmụta ma na methodological mkpakọrịta.
The Undergraduate ọzụzụ mejupụtara abụọ nkebi:
– Tupu adakarị (1-2 afọ);
Hospital clerkships na-eme ya na-amụ na-adakarị ọzụzụ malite na 2nd N'afọ nke ọmụmụ;
– adakarị (3-6 afọ).
The facilities of the University serve to meet medical and pharmaceutical education needs. Isi ụlọ na ụlọ ọrụ na-na-esonụ:
– 5 ọzụzụ ụlọ
– ọgwụ eze
– Ụmụaka Clinical Hospital
– 29 adakarị saịtị
– 5 gọọmenti rụrụ
– Njikere nke ọma n'ụlọ ime nnyocha okụre
– Computer ọmụmụ na Internet ohere
– Library na a ngwaahịa nke 700 000 ihe nke agụmakwụkwọ na nkà mmụta sayensị ndị e ji amụ
– The ọha isi nri usoro na-agụnye a kantiin na a 120 oche-iri-ụlọ; there are also snack-bars for students in all the hostels and University. E wezụga, senior students while undergoing training at the clinical sites of the university have an opportunity to use the canteens of the healthcare facilities.
– Nlekọta nzukọ. N'oge dum oge nke ọmụmụ, Undergraduate na Postgraduate ụmụ akwụkwọ na-esịn idem ese enyịn ahụ ike na mkpara nke Municipal Healthcare Facility «City outpatient Clinic #15 (-amụrụ Clinic)»N'ihi na obodo nke Voronezh. The mmekọ ahụ ike center nke Clinic emi odude ke ozugbo mbọhọ ka Ụlọ Mbikọ #3 -eje ozi n'ihi na mma nke ụmụ akwụkwọ.
– The egwuregwu ụlọ ọrụ na-agụnye a egwuregwu na mma mgbagwoju na a ngụkọta nke ebe 2838.2 m² (ime ụlọ center) onwem na a igwu mmiri-ọdọ mmiri, gymnastic ebe, ihe ọṅụṅụ mmanya, na a screening nnwale ụlọ.
A iche iche nke ozizi iche-iche na ụzọ na-eji. Ha bụ:
– Omenala iche nke ozizi: okwu, nzukọ ọmụmụ, bara uru klas na ụlọ ọgwụ clerkships.
– Modern ụzọ izi ihe ndị na usoro: kọmputa na Internet ọmụmụ, nsogbu ndị dabeere na ozizi, video dabeere na ọmụmụ, agụmakwụkwọ software.
– nhoputa ọmụmụ.
– Self-nkuzi nke a gbara ume.
Ịga ọmụmụ na clerkships amanyere bụ iwu nke niile ụmụ akwụkwọ.
Clinical nkà ndị dị mkpa ná placements na-adakarị saịtị nke mmekọ ụlọ ọgwụ. Malite site na 2nd N'afọ nke ọmụmụ, ugw dabeere na ozizi a na-akwado na mesiri ike na-enwe ndidi-dọkịta mmekọahụ. The clerkships na-esịn idem ese enyịn ukwuu ruru eru na ahụmahụ ndị dibịa.
Ma usoro iwu ihe ọmụma na-adakarị nkà nwale usoro-agụnye:
– ule na-eweta
– Rue / ada grading ule
– Discussion iche iche.
Final asambodo na-eme site na steeti ikpeazụ ule na-eweta, nke na-enye ihe ntule nke usoro iwu ihe ọmụma na-adakarị nkà.
The gbasaa eme nke ụmụ akwụkwọ na-ndokwa site ọha òtù na-elekwasị anya na e kere eke nke ọma na ọnọdụ maka ntụrụndụ ha, onwe-nzukọ, na onwe-mmezu. The Center maka Student Cultural Initiatives, na Student Sports Club, na Student Scientific Society, Mbikọ Mmụta Councils, ụmụ akwụkwọ 'ìgwè, afọ ofufo na-eto eto iche iche na-iji nagide ihe ịma aka.
The Faculties of General Medicine, Pediatrics, dentistry, ahịa ọgwụ, and Preventive Medicine train specialists on the basis of complete secondary education.
Ị chọrọ discuss Voronezh State Medical Academy ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Voronezh State Medical Academy ukara Facebook
Russian State University maka Humanities Moscow